Griin na-ere ihe ọkụ China Manufacturer
Nkọwa:Igwe Ngwurugwu Greenhouse,Mkpụrụ Na-ekpocha Mkpụrụ Na-emepụta Mkpụrụ Na-ekpo ọkụ,Akwukwo nri ndi oru ubi Greenhouses kpochapu ihe nkiri
Home > Ngwaahịa > Ulo Okpokoro Ugbo > Mkpụrụ Okpomọkụ Ọkụ > Griin na-ere ihe ọkụ
Griin na-ere ihe ọkụ
Ihe Nlereanya.: XHC-F005B
Ihe nkiri ihe nkiri maka akuku ihe oru ngo tinyere: griin haus bu ihe ndi ozo bu ihe ndi ozo, ihe ndi ohia na akwukwo nri na ihe ndi ozo.
Ojiji i nstructions maka Seedling Okpomọkụ ute:
1. Na-agbanye Mkpụrụ Igwe Mmiri Ọkụ Na-arụ na mmiri siri ike, nke dị mma. Ekwela ka ịnọdụ ala na mmiri.
2.Pụnye okpukpu ọkụ ọkụ n'ime oghere ike 220 volts.
3. A na-emezi ihe ọkụkụ a na-amị mkpụrụ na-eme ka ọ dịkwuo ebe dịka 10-20F n'elu elu okpomọkụ.
4.Akwunye osisi osisi, ite ma ọ bụ ihe ntanetị na Seedling Heat Mat.
5.N'ihi na okpomọkụ na-agbanye mgbọrọgwụ okpomọkụ na-etinye Seedling Heat Mat na mmiri a gwara mmanụ n'elu ụlọ oyi.
6.Utu nke iru mmiri na-enye aka na-egbochi mmiri abd enyere aka na osisi germinate na mgbọrọgwụ ngwa ngwa.
Uru nke na-amị mkpụrụ ọkụ:
1. Mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ ebe ambiebt tenperature iji melite usoro germination
2.Helps gardeners nwere ihe ịga nke ọma ọganihu na seedlings na cuttings.
2. Nrụkọta ọrụ dị arọ na-eme ka ihe a dịgide adịgide.
3. Na-atụgharị uche na nhazi ihu igwe ọkụ
4. Plug & Gwuo ike dị elu.
Foto nke seedling okpomọkụ mat:
Ngwaahịa : Ulo Okpokoro Ugbo > Mkpụrụ Okpomọkụ Ọkụ
Nhazi ọhụrụ Uwe aka na-ekpo ọkụ n'oge oyi Kpọtụrụ ugbu a
Akpụkpọ anụ na-ekpuchi akpụkpọ anụ na-ekpo ọkụ Batrị Kpọtụrụ ugbu a
Obere Okpokoro Ugbo Ogwu Ugbo Ocha Ocha Kpọtụrụ ugbu a
Ọpụpụ n'èzí Na-edebe Batrị Ndị Kwadoro Kpọtụrụ ugbu a
Igwe Ngwurugwu Greenhouse Mkpụrụ Na-ekpocha Mkpụrụ Na-emepụta Mkpụrụ Na-ekpo ọkụ Akwukwo nri ndi oru ubi Greenhouses kpochapu ihe nkiri Igwe Egwuregwu Infrared Ime ụlọ Greenhouse Igwe Egwurugwu Na-agba Efu Gaa na Greenhouse Anya Igwe Egwuregwu Infrared